दुबईबाट उद्दार गरिएकी पासाङलाई टीम बद्रीको तर्फबाट ३ लाख सहयोग
लिस्बन, पोर्चुगल । सानैमा उनको बुवाले अर्के केटीसँग बिहे गरे। आमाले पनि अन्यत्रै बिहे गरिन्। सानैमा टुहुरी भएकी सिन्धुपाल्चोककी पासाङ योञ्जन लामा (वर्ष २८) को जीवनी कुनै फिल्मी कहानीभन्दा कम छैन।
र, एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा.बद्रि केसीको संयोजकत्वमा रहेको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमले उनको र उनको छोरीको उद्धार गर्यो। ‘डेलिभरी’को समय उनीसँग पैसा पनि थिएन। जागिर गुमाउनु परेको हुनाले उनलाई कम्पनीले सहयोग गर्ने अवस्था पनि थिएन। तर, एनआरएनएको त्यही राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना समितिले उनलाई भरपुर सहयोग गर्यो। अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ५० हजार दिराम पनि संघ र दुबईको स्वास्थ्य विभागको समवन्यमा मिनाह भयो। एनआरएनएकै पहलमा उनी २८ जुन २०२१ मा नेपाल फर्किन सफल भइन्।
दुबइस्थित अस्पतालमा हुँदा उनीसँग केहीले बच्चा पालिदिने भन्दै मागेका पनि थिए। तर, आमाको मन कसरी मान्छ? उनको मनले पनि मानेन। अहिले डा. केसी र उनको टिमको सहयोगी मनका कारण आफूलाई हिम्मत मिलेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरुले सहयोग नगरिदिएको भए, म यहाँसम्म आइपुग्दिन थिए होला। अहिले पनि मेरो चासो राखेर आउनु भएको छ,’ उनले भनिन्।
वास्तवमा यो घटनालाई डा. केसीले निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन्। समाजमा देखिने यस्ता विकृत घटनाले उनी उद्धेलित पनि हुने गरेका छन्। ‘म अरुको दुःख हेर्न सक्दिन। यो घटनामा हामी संलग्न भएदेखि नै म साथीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छु,’उनले भने, ‘राम्रो नभएको जानकारी पाएपछि फेरि सबै मिलेर सहयोगी हात अगाडि बढाएका हौं।’
डा. केसी संयोजक रहेको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना समितिले पासाङलाई मात्र होइन, उनी जस्ता विदेशमा दुःख पाएका २ हजार नेपालीको उद्धार गरिसकेको छ। एनआरएनएको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यो आफैमा ठूलो उपलब्धी हो। सोमबार टिम बद्रिको समूहले पासाङलाई आर्थिक सहयोग मात्र गरेको थिएन। जाडोका लागि न्यानो कपडाको पनि व्यवस्था गरेको थियो। यी सबै सामान पासाङ जस्तो नियतीले ठगिएका महिलालाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदा यमुना भट्टराई पनि दंग थिइन। उनी भन्दै थिइन, ‘मानव भएर मानवीय कार्यमा थोरै भएपनि सहयोग गर्न पाउनु हामी सबैको भाग्य हो। अफ्ठ्यारोमा परेका सबै नेपालीलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तब्य पनि हो।’
पासाङको सहयोगमा जुटेका एनआरएनएका सचिव अमेरिका निवासी गौरीराज जोशी पनि विपतमा परेका नेपाली चेलीहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु आफ्नो पनि भाग्य भएको बताउँछन्। ‘यस्ता घटनाले कसको मन दुख्दैन र! मेरो पनि दुखेको छ। तत्कालका लागि हामीले केही आर्थिक सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य खाली आर्थिक सहयोगमा मात्र केन्द्रित छैन। उनलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ पनि केन्द्रित छ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा दुःख पाएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्।